Sunday June 26, 2016 - 23:24:10 in Articles by Super Admin
Waagacusub.net - Daawo odayaasha beesha Waceeysle oo hubkii uu Xasan Garguurte siiyay ku wareejiyay Al-Shabaab. Qoryahaan cusub ee odaayasha Beesha Waceeysle ku wareejiyeen Al-Shabaab waxaa horey u bixiyay Madaxweyne Xasan Garguurte .
Isweeydii Madaxweyne Garguurte muxuu yahay ? Miyaanu ahayn nin taageeray Al-Shabaab mar haddii hubkii uu siiyay beeshiisa lagu dhameeyn doono boqolaal qof oo Somalia?
Sikastaba ha ahaatee, Hubkaan uu Garguurte siiyay beeshiisa Waceeysle ee lagu wareejiyay Al-Shabaab wuxuu saameeyn weyn ku yeelan doonaa Madaxweynaha,waxaana la rumeeysan yahay iney beesha Caalamka arriintaan ka falcelin doonto.